Midowga AFRIKA oo si deg deg ah u aqbalay dalabkii Midowga Musharaxiinta - Caasimada Online
Home Warar Midowga AFRIKA oo si deg deg ah u aqbalay dalabkii Midowga Musharaxiinta
Midowga AFRIKA oo si deg deg ah u aqbalay dalabkii Midowga Musharaxiinta
Muqdisho (Casimadda Online) – Midowga Afrika ayaa qaaday tallaabo deg deg ah oo ay mid ka mid ah diblomaasiyiinta ugu saraysa kooxda dhexdhexaadinta Soomaaliya uga saarayaan xubnaha ay magacaabeyn kadib markii ay sidaas codsadeyn Midowga Musharixiinta.
Caasimada Online, ayaa ogaatay in Midowga Afrika uu tallaabadaas qaaday kadib cadaadis uga yimid xubno ka tirsan Beesha Caalamka iyo dacwad ay gudbiyeen xubnaha Midowga Musharixiinta oo si toos ah usoo dhaweeyey ergeyga loo soo magacaabay dhex-dhexaadinta balse walaac ka muujiyey in Babatunde Taiwo uu kamid ah noqdo la taliyeyaasha madaxa dhexdhexaadinta.
Sidoo kale waxaa lagu eedeeyey inuu laaluush ka qaato Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugida Qaranka islamarkaarna uu siraha wada-hadallada u gudbiyo taliska madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Midowga musharixiinta ayaa ku adkeysatay in ka mid noqoshada Taiwo ay tahay mid aysan aqbali karin sababo la xiriira dabeecadiisa musuq-maasuqa iyo cilaaqaadka uu la leeyahay Villa Soomaaliya.
“Ma aqbali karno in ergeyga Gaarka ah ee Midowga Afrika uu ka qeybqaato wadahadal xasaasi ah ama qaabab kale oo xiriir ah ilaa iyo inta Mr Taiwo uu ku jiro boos kasta uu ku heli karo,” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay musharixiinta.
“Marka waxaan si xushmad leh u codsaneynaa in laga laabto magacaabida Mr Taiwo iyadoo la tixgelinayo kooxda Ergeyga Gaarka ah waxaana si adag ugu talineynaa in dib loogu celiyo waax kale oo ka tirsan Midowga Afrika,” ayaa sidoo kale lagu yiri qoralka.
Talaabadan uu Midowga Africa qaaday ayaa loo arkaa inay tahay mid ka qeyb qaadan karto ka mira dhalinta kulanka uu madaxda Maamul Goboleedyada, Gobolka Banaadir iyo Dowladda Dhexe ugu yeeray Ra’isulwasaare Roonle kaasoo lagu ballansan yahay 20 Bishaan.